पेटदेखि छातीसम्म शरीर जोडिएका जुम्ल्याहा शिशु ! - Everest Dainik - News from Nepal
पेटदेखि छातीसम्म शरीर जोडिएका जुम्ल्याहा शिशु !
कालिकोट, मंसिर । कालिकोटमा पेटदेखि छातीसम्म शरीर जोडिएका जुम्ल्याहा शिशुको जन्म भएको छ ।
जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका–५ की २८ वर्षीया ललिता बुढाले आइतबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा जुम्ल्याहा शिशुको जन्म दिएकी हुन् । दुवै बालिका नै जन्मिएका छन् ।
उनीहरुको पेटदेखि छातीसम्म शरीर जोडिएको छ । जुम्ल्याहा बालिकालाई एनआईसियुमा राखिएको छ । -रासस
याे पनि पढ्नुस आँखा र नाक नभएको बच्चा जन्मियो !
ट्याग्स: Baby"\_, kalikot